Sport – SanThitLa
Writer | January 3, 2021
ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့ ၂၀၂၁ ပွဲစဉ်များတွင် အောင်လအန်ဆန်၏ ချန်ပီယံ စိန်ခေါ်ပွဲ ပါဝင်ဖွယ်ရှိ… One Championshipက ၂၀၂၁အတွင်းကျင်းပမည့် MMA ပွဲစဉ်များတွင်အောင်လအန်ဆန်၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းတစ်ကျော့ပြန်ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ ပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်းဟောင်ကောင်အခြေစိုက် South China Morning Post ကရေးသားဖော် ပြခဲ့သည်။One Championshipက ၂၀၂၁အတွင်းကျင်းပမည့် MMA ပွဲစဉ်များတွင်အောင်လအန်ဆန်၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းတစ်ကျော့ပြန်ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ ပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်းဟောင်ကောင်အခြေစိုက်
One Championship ရဲ့ ၂၀၂၁ ပွဲစဉ်များတွင် အောင်လအန်ဆန်၏ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ ပါဝင်ဖွယ်ရှိ One Championshipက ၂၀၂၁အတွင်းကျင်းပမည့် MMA ပွဲစဉ်များတွင်အောင်လအန်ဆန်၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းတစ်ကျော့ပြန်ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ ပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်းဟောင်ကောင်အခြေစိုက် South China Morning Post ကရေးသားဖော် ပြခဲ့သည်။ One Championshipက ၂၀၂၁အတွင်းကျင်းပမည့် MMA ပွဲစဉ်များတွင်အောင်လအန်ဆန်၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းတစ်ကျော့ပြန်ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ ပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်းဟောင်ကောင်အခြေစိုက် South
စောရွှေဘအလီ ဆိုတာဒေဝ ရဲ့ အိမ်မက်တွေ & ဈေးကွက်တွေရိုက်ချိုးမယ့်သူဖြစ်လာမလား …
စောရွွှေဘ အလီ ဆိုတာဒေဝ ရဲ့ အိမ်မက်တွေ & စျေးကွက်တွေရိုက်ချိုးမယ့်သူဖြစ်လာမလား … သူဟာ မွေးထိုင်းမှာကျင်လည်ခဲ့သူဖြစ်သလိုရိုးရာလက်ဝှေ့ကိုပြည်တွင်းဝင်ရောက်အနီးကပ်ပညာရှင်ဆရာရန်ကုန်အောင်ဒင်ထံသင်ယူခဲ့ပြီး ရိုးရာလက်ဝှေ့သမား မင်းမောင်မောင် (တောင်ကလေး)ပိုက်ထွေး ( သထုံ ) အား ဘတပြန် ကျားတပြန်စိန်ခေါ်ထိုးသတ်ပြီး ရိုးရာပရိတ်သတ်အကြိုက်တွေ့နေရင်း…. ရိုးရာကြိုးဝိုင်းတွင်ကြိုးဒိုင်စည်းကမ်းကိုမျှတမှုမရှိလို့ဆိုကာငြင်းဆန်ပြီးကြိုးဝိုင်းပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့လို့ရိုးရာလူကြီးများကြားက ပြည်ဝင်ကစားခွင့်ပိတ်ခံရတဲ့စောရွှေဘ တစ်ယောက် ပြည်တော်ပြန်ဝင်ပြီးရွှေရာမာန် နှင့် ဆုံတွေ့ဖို့ ပရိုမိုတာတစ်ချို့ကြံရွယ်ပြန်လည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်စိတ်ကူးယဉ်တွေက ဒေဝ
မြန်မာလက်ရွေးစင်အောင်သူကို ဒေါ်လာ (၅)သောင်း မြန်မာငွေ သိန်း(၇၀၀)ခန့် နဲ့ အပြီးသက်ရောင်းချလိုက်တဲ့ ရတာနာပုံအသင်း
ရတနာပုံအသင်းနဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူးအောင်သူကတော့ ထိုင်းလိဂ်ဝမ်းကလပ်ဘူရီယမ်အသင်းနဲ့ တရားဝင်ပူးပေါင်းလိုက်ကြောင်း ဘူရီယမ်အသင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံအရသိရပါတယ်။ အောင်သူအနေနဲ့ ယခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ထိုင်းလိဂ်ဝမ်းကလပ်ဘူရီယမ်အသင်းနဲ့သွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ စာချုပ်ပါအချက်အလက်တစ်ချို့မှာလည်း ယခင်ပုံစံတွေကလိုအငှားချတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ…. အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅) သောင်းနဲ့ အောင်သူကိုအပြတ်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရတနာပုံအသင်းမန်နေဂျာကိုအတာဦးကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖဒါပေမယ့်လည်းအောင်သူနဲ့ ဘူရီယမ်တို့ရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ သိရှိရခြင်းမရှိသေးပဲ၊ အောင်သူပါဝင်ကစားမယ့်ဘူရီယမ်အသင်းကတော့ ထိုင်းလိဂ်ဝမ်းပြိုင်ပွဲရဲ့ အဆင့် (၅) နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့အသင်းပါ။ အောင်သူအနေနဲ့ကလည်း ထိုင်းကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Police
“၂၇ နှစ်ကြာ အသင်းရဲ့ လာဘ်ကောင် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့ သူကို ထုတ်ပယ်လိုက်သဖြင့် အာဆင်နယ်အသင်း ဝေဖန်ခံရ”
၂၇ နှစ်ကြာ အသင်းရဲ့ လာဘ်ကောင်အရုပ်အဖြစ် အသုံးတော်ခံခဲ့သူကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းအတွက် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ အသုံးစရိတ် လျှော့ချမှုဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ဒီလို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုဆိုးရွားနေချိန် အခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်း ဝန်ထမ်း ၅၅ ဦးကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်ဝေဖန်ခံရဖူးပါတယ်။ The Athletic သတင်းအရ ဂျယ်ရီကွီ ဆိုသူဟာ ၁၉၉၃
မကြာခဏဆိုသလို အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပက်သက်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခံနေရတဲ့ နေမာလိုကစားသမားမျိုးသိပ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ နေမာဟာ မက်ဆီနဲ့ ရော်နယ်ဒိုတို့ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကို လွှဲပြောင်းယူနိုင်မယ့်သူလို့ ထင်ကြေးပေးသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ နေမာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကိုပြောင်း ရွှေ့ခဲ့ပြီး၊ပွဲပေါင်း၈၀ကစားထားကာ ၆၉ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နေမာရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှစပြီး ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ ပွဲပေါင်း၁၅၅ပွဲကစားထားပါတယ်။ဒါကြောင့် နေမာဟာ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကစားထားတဲ့ ပွဲပေါင်း ၇၅ပွဲကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လွဲချော်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ